तपाईंलाई थकाइ धेरै लाग्छ ? साबधान, निम्त्याउन सक्छ यस्ता जोखिमहरु - Purbeli News
तपाईंलाई थकाइ धेरै लाग्छ ? साबधान, निम्त्याउन सक्छ यस्ता जोखिमहरु
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक १२, २०७७ समय: २१:१४:४१
उत्पादनशील उमेर समूहका मानिस पनि थकाइ लागेर केही गर्न नसकेको गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘बिहान उठ्दा आलश्य हुन्छ, साँझ ढल्न नपाउँदै ओछ्यानमा पल्टिहालौं जस्तो हुन्छ, शरीर नै धान्न हम्मेहम्मे हुन्छ ।’ वृद्ध उमेरका मानिसलाई त थकाइले झनै समस्या दिन्छ । थकाइ लाग्दा घरको तलमाथि समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा अल्झिएको छ अधिकांश वृद्धवृद्धाको जीवन । निरोगी देखिनेहरू पनि थकाइ लागेर हैरान हुन्छु भन्छन् । आखिर किन लाग्छ थकाइ ?
थाकाइ लाग्नु हामीले दैनिक खाने खानासँग पनि सम्बन्धित छ । बिहानको खाजा नखाई एकैपटक खाना खानाले पनि दिनभरि थकाइ महसुस हुन्छ । नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालकी डायटिसियन डा. प्रणित सिंहका अनुसार बिहान खाजा खाने र खाना पनि समय मिलाएर खाने हो भने थकाइ कम लाग्छ । बिहान खाली पेट राख्ने र एकैपटक कार्बोहाइड्रेड धेरै भएका खाना खानाले शरीरमा आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वको कमी भई काम गर्न अल्छी लाग्ने वा कार्यक्षमतामा कमी आउने गर्छ ।
अध्ययनले कफी पिउँदा थकाइ मेटिने पुष्टि गरेका छन् । तर धेरै मात्रामा क्याफिनको प्रयोगले थकाइ मेटाउने नभएर बढाउने काम गर्छ । डा. सिंहका अनुसार धेरै कफीले गर्मी बनाउँछ । विशेषगरी दिउँसो ३ बजेपछि वा सुत्नुअघि कफी पिउँदा बढी थकाइ महसुस हुन्छ । थकाइ लाग्ने समस्या भएका मानिसले नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ या योगलाई अपनायो भने पनि थकाइको महसुस कम हुनसक्छ । धेरै नै थकाइ लाग्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो संकेत होइन ।
संसारमै घातक मानिएको ‘वेगनर्स’ रोगका कारण पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । मिर्गौला, श्वासप्रश्वासका धमनी, रक्तनशालगायतमा थाहै नपाउने गरी क्षति पुर्‌याउने उक्त रोगका कारण पनि थकाइ लागेको हुनसक्छ । त्यसैले थकाइ लाग्ने विभिन्न कारण हुन सक्छन् । सामान्य ठानेर टारियो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो क्षति पुर्‌याउन सक्छ । समयमै उपयुक्त चिकित्सकसम्म पुगी थकाइबारे परामर्श गर्नु जाती हुनेछ ।